ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားသံတမန်များအနေဖြင့် လုပ်ထုံး၊ စံသတ်မှတ်ချက်များအညီနှင့် ဆောင်ရွက်ကြရန် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တောင်းဆို။ ပြည်ပသံတို့က နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်နေသလား ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မဲဆွယ်နေသလား မေးခွန်းထုတ် – H2Oupdatenews
ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားသံတမန်များအနေဖြင့် လုပ်ထုံး၊ စံသတ်မှတ်ချက်များအညီနှင့် ဆောင်ရွက်ကြရန် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တောင်းဆို။ ပြည်ပသံတို့က နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်နေသလား ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မဲဆွယ်နေသလား မေးခွန်းထုတ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားသံတမန်များအနေဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရေး၌ ပူးပေါင်းကြရန် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အေကေအဗ္ဗဒူမိုမန်က တောင်းဆိုလိုက်သည်ဟု ဘင်္ဂလားအခြေစိုက် Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။
စနေနေ့၌ သတင်းမီဒီယာများသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အင်တာနက်မှတဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ဗွီဒီယိုကို ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ အဆိုပါဗွီဒီယို၌ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံ၏ ထူးကဲစွာအကြောင်းမလှဖြစ်လာသော ပြည်တွင်းရေးတွင် နိုင်ငံခြားသံတမန်တို့အနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကို အစုအဖွဲ့အသွင် tweet campaign တွီတာကင်ပိန်း တရားဝင်ဖော်ပြကြရာ မီဒီယာကဏ္ဍကလည်း ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် ဆော်သြလိုက်သည်ဆို၏။
နိုင်ငံခြားသံတမန်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ မကြေနပ်ချက်များကို စာရွက်စာတန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြနိုင်ကြောင်း၊ သို့သော် ၎င်းအစား အများပြည်သူသိအောင် ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်လျှက်ရှိသည်ကို တွေ့မြင်နေရကြောင်း၊ ဤတွင် ၎င်းသံတမန်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့နိုင်ငံအရေးဆောင်ရွက်နေသလား ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မဲဆွယ်နေသလား မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်ရကြောင်း ဝန်ကြီး မိုမန်က ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ကြာသပတေးနေ့၌ အမေရိကန်နှင့်ဗြိတိန်အပါအဝင် ၇-နိုင်ငံမှ သံအမတ်ကြီးတို့က Covid-19 ကပ်ရောဂါကျရောက်လျှက်ရှိချိန်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းအချက်အလက်ရရှိရေးအတွက် သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်၏ အရေးကြီးပုံကို Twitters ၌ ရေးသားလွှင့်တင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
အကယ်၍ သံအမတ်ကြီးများအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း၊ မြန်မာကဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်းရိုဟင်ဂျာဟု ဖော်ပြ ) တို့အပေါ် ဖြုတ်ထုတ်နှုတ်ပယ်လုပ်နေခြင်းများမှ ရပ်တန့်ရန် တိုက်တွန်းသည်ဟု ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့လျှင် မိမိအနေဖြင့် အတိုင်းမသိ ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ဆိုင်ရာ ပြည်ပသံအမတ်ကြီးများမှာ ဉာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံသော အသိအမှတ်ပြုထိုက်သူများဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြလိုပါကြောင်း၊ သံတမန်ရေးရာ စံနှုန်းများကိုထိန်းသိမ်းကြခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အရည်အသွေးများကို ပြသနိုင်လိမ့်မည်ဟု မိမိမျှော်လင့်ပါကြောင်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အေကေအဗ္ဗဒူမိုမန်က ပြောဆိုသည်ဟု သတင်း၌ ဆက်လက်ရေးသားသည်။
(( လက်ရှိ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Abul Kalam Abdul Momen အဘူကယ်လမ်အဗ္ဗဒူမိုမန် ( ၇၃-နှစ် ) သည် ၂၀၀၉-ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅-ခုနှစ်အထိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံ၏ အမြဲတန်းသံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ဒါကာတက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးပညာဘွဲ့ B.A. ( ၁၉၆၉) M.A. ( ၁၉၇၁-ခုနှစ်တို့၌ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၇၆-ခုနှစ်တွင် ဒါကာစင်ထရယ်ကောလိပ်မှ LLB ဥပဒေပညာဘွဲ့ ထပ်မံရရှိသည်။
၁၉၇၉-တွင် အမေရိကန် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ကုန်သွယ်စီးပွားစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ MBA ရရှိပြီး ၁၉၈၈-ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးပညာ ပါရဂူဘွဲ့ PhD ကို အမေရိကန် နော့သ်အိစ်တင်းယူနီဗာစီတီမှ ဆက်လက် ရရှိသည်။
ဒေါက်တာမိုမန်၏ အကိုအကြီးဆုံးသည် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး အဘူမဲလ်အဗ္ဗဒူ မူဟစ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈-ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်ဆဲလ်ဟက်မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ်-၁ မှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ရရှိခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း သိမှတ်ရပါသည်။ ။သတင်းဘာသာပြန်သူ ))
#ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားသံတမန်များအနေဖြင့်လုပ်ထုံး၊ စံသတ်မှတ်ချက်များအညီနှင့်ဆောင်ရွက်ကြရန် #ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအေကေအဗ္ဗဒူမိုမန်
Previous Previous post: အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်တွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စွဲရောဂါကူးစက်-သေဆုံးဦးရေ နေ့စဉ်တိုးတက်နေ၊ ၁၀-ရက်ကြာတိုင်း အရေအတွက် ၂-ဆတိုးနေ၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံတဝှမ်း ကင်းလှည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဦးရေ တိုးမြှင့်ချထား၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက် စမ်းသပ်ဆဲကုသဆေး ရမ်ဒီဆီဗာကို ဘင်္ဂလားဒက်ရှ်၌လည်း စတင်ထုတ်လုပ်
Next Next post: တွေ့ရင် ပြောကြပါခင်ဗျ ၊ ကျေးဇူးဆပ်ပါမည်